उपसभामुखसहित नेपाल पक्षलाई ५ मन्त्रालय : उपसभामुखमा झाँक्री, को-को बन्दै छन् मन्त्री ? - Nepal Tale | - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
उपसभामुखसहित नेपाल पक्षलाई ५ मन्त्रालय : उपसभामुखमा झाँक्री, को-को बन्दै छन् मन्त्री ?
Published Date : २०७८ श्रावण १९, मंगलवार
काठमाडौं। लामो समयदेखि रिक्त रहेको प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले दावी गरेको छ । सत्तारुढ गठवन्धनसँगै सहकार्य गरिरहेको नेपाल पक्षले उपसभामुख आफ्नो पक्षलाई दिन यसअघि शीर्ष नेताहरुको बैकमा प्रस्ताव गरेको हो ।
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामख फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्नेछ । विगतमा सत्तारुढ नेकपाका सभामुख भएपनि उपसभामुख चयन हुन सकेको थिएन । नेपाल पक्षले उपसभामुखमा कसलाई पठाउने भन्ने कुरा भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
त्यस्तै उपसभामुख रामकुमारी झाँक्रीलाई बनाउने कि भन्ने चर्चा समेत चलेको छ। सभामुख पुरुष भएकाले उपसभामुख हुनु पर्ने छ। सो कारण पछिल्लो समय चर्चामा रहेकी झाँक्रीलाई उपसभामुख बनाउने चर्चा चलेको हो।
शीर्ष नेताहरुको बैठकमा नेपाल पक्षले सरकारमा जाने हुंदा ५ मन्त्रालयसहित उपसभामुख दावी गरिरहेको माओवादी उच्च श्रोतले जानकारी दियो । एमाले संस्थागत हिसावले सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने अझै किटान नभएकाले मन्त्रीहरुको विषय भने ओझेलमा परेको छ ।
माओवादी उच्च श्रोतका अनुसार नेता नेपालले यस अघि सरकारमा सहभागि हुनका लागि एमालेका ३ सांसदको नाम अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष दिईसकेका थिए । सोही अनुसार आईतबार वा सोमबार भित्र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी थियो । तर एमाले एकताका विषयमा कार्यदल तहमा केही सकारात्मक छलफल भएकाले नेपाल पक्ष तत्काल सरकारमा सहभागि नहुने कुराको जानकारी नेता नेपालले प्रचण्डलाई दिएका थिए ।
यस अघि बरिष्ठ नेता नेपालले एमालेका तर्फबाट डोटीका सांसद प्रेम आले र तनहुका सांसद किसान श्रेष्ठसहित अर्को एक जनाको नाम अघि सारेका थिए । तर तयारी अनुसार मन्त्रिपरिषद विस्तारको काम नभएकाले आले र श्रेष्ठसमेत मन्त्री बन्ने नबन्ने भन्ने कुराको किटान भएको छैन ।
एमाले नेपाल पक्षबाट सरकारमा सहभागि हुनेमा यसअघि आले, श्रेष्ठसँगै मेटमणी चौधरी, यज्ञराज सुनुवार, बिरोध खतिवडा, बेदुराम भुषाल लगायतको चर्चा चलेको थियो । दोश्रो तहका नेताहरु भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्टलगायतका नेताहरु अध्यक्षमा केपी ओलीलाई नै कायम राखेर एमाले एकताको पक्षमा लागेपछि बरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल र तेश्रो तहका नेता बार्ताटोलीसँग असन्तुष्ट थिए ।